Xoogaga Al Qaacidda oo si buuxda u maamulaya Magaalada Al-mukalla iyo Xuuthiyiinta oo Caden laga saaray.
Saturday April 04, 2015 - 09:59:06 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo xooggan ay ka socdaan intabadan gobollada dhaca Koonfurta iyo Koonfur Bari wadankaasi.
Maleeshiyaad shiicada Xuuthiyiinta ayay u suurtagashay in ay gudaha ugalaan magaalada Caden ee ah caasimadda KMG ah,goob joogayaal ayaa sheegay in Xuuthiyiintu ay qabsadeen qasriga madaxtooyada iyo xarumo dowladood balse duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka Sacuudiga ayaa ku qasabtay dib ugurasho.
Dagaallo saacado badan qaatay kadib ayaa la sheegay in maleeshiyaadka guddiyada shacabka ee taabacsan Cabdi Rabih ay dib uqabsadeen xaafado Caden katirsan oo Xuuthiyiinta xoog ku galeen.
Dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta Ansaaru shareecah ayaa isku fidiyay magaalada Al-Mukallah ee xarunta u ah gobolka Xadramuut,ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in boqolaal dagaalyahan oo Alqaacidda katirsan ay jidgooyooyin amniga lagu sugayo dhigteen waddooyinka muhiimka ah ee magaalada.
Mujaahidiinta ayaa dagaal la’aan qabsadey saldhigga 2-aad ee ciidanka Melleteriga iyo bakhaarada waaweyn ee hubka,ciidamo ku sugan garoonka diyaaradaha iyo saldhigyada ku dhaw ayaa dagaal kooban lagalay mujaahidiinta.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in xoogaga Al Qaacidda ay si caadi ah u maamulayaan magaalada mana jiraan wax colaadin ah oo ay kala kulmayaan taageerayasha Haadi Mansuur oo magaalada dhinac ka jooga.
Yemen waxaa ka socda loolan wajiyo badan leh oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan waxaana muuqata in mujaahidiintu ay ka faa’iidaysanayaan burburka dowladeed ee Yemen kajira.